Times24 Nepal » विदेशीका श्रीमती र एकल महिला पत्याए मनग्गे आमदानी हुने।
विदेशीका श्रीमती र एकल महिला पत्याए मनग्गे आमदानी हुने।
काठमाडौं। लवाई खवाई नै फरक छ, देख्दा हट्टाकट्टा, कुरा गराई पनि फरक छ पोखराका २८ बर्षिय मनोज क्षेत्री (नाम परिवर्तन)को गेटअप हो यो। शहरका पुरुष यौ’नकर्मी उनको स’म्पर्कमा हप्तामा ४/५ जना महिला आउने गर्छन। उनीहरुसंग यौ’न स’म्पर्क पनि हुने गर्छ। अधिकां’श महिला उनलाई खोज्दै आउछँन् भने कतिपयलाई उनी पट्याउँछन्।
आफुलाई पुरुष ‘यौ’नकर्मी’ भन्न नरुचाउने उनले तिर्खाएकोलाई प्यास मे’टाएको मात्र बताए। मलाई खोज्दै आउँछन उनीहरु प्राय: संग यौ’न सम्प’र्क हुने गर्छ’ एक होटलमा साथीसंगै महिलालाई पर्खिएर बसेका उनले भने। कतिलाई त पट्याइन्छ तर धेरै महिलाहरुले खोजेर आउने गर्छन। उनको दैनिकी नै फरक छ।
हरेक दिन उनको भिन्दै तवरले बित्छ। समय मिलाएर उनीहरुसंग यौ’न स’म्पर्क गर्ने गरेको उनले बताए। मोवाइलबाटै सबै कुराकानी हुने र भेट हुने उनको भनाई छ। उनीहरुले सामान्यदेखि महंगा होटल बुक गर्ने गर्छन। कतिपय विबाहित महिलाहरुले भने परिवारका अन्य सदस्य नभएको मौका छोपेर घर अथवा डेरालाई नै उपयुक्त स्थान बनाउने गरेको पाइन्छ।
विबाहित मनोजले छुट्टै व्यवसाय गरेपनि त्यो भने देखाउनको लागि मात्र हो। यौ’न सन्तुष्ट बनाए बा’पत्त महिलाहरुबाट पाउने रुपैयाले नै उनलाई घर परिवार चलाउन तथा विभिन्न ख’र्च गर्नमा सहयोग पुर्‍याएको छ।
फुर्सदै हुदैन, समय मिलाउनै गाह्रो हुन्छ’ मनोजको आडैमा रहेका अर्का पुरुष यौ’नकर्मी नवीन गुरुङ (नाम परिवर्तन)ले भने, मोवाइलबाटै सबै कुरा हुन्छ अनि समय मिलाएर होटलतिर गइन्छ।
उनीहरु दुवैको सम्पर्कमा धेरैजसो विबाहित महिलाहरु आउने गरेका छन्। ३५÷४० बर्ष उमेरसम्मका महिलाहरु आफ्नो स’म्पर्कमा आएको गरेको उनले बताए। करिव तीन बर्षको उनको यात्रामा हालसम्म करिव ४ सय महिलाहरुसंग यौ’न सम्पर्क भएको मनोजले दाबी गरे।
मैले शुरु गरेको ३ बर्ष बित्नै लाग्यो’ उनले अगाडि रहेको साथीलाई सोध्दै भने, ४ सय त काटे होलान। अहिले क्षेत्रीको सम्पर्कमा नियमित १५÷२० जना विबाहित महिला छन्। ग्राहकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढि बिदेश श्रीमान हुनेका श्रीमती रहेका छन् भने अन्य विभिन्न जागिर तथा पेशामा आवद्ध महिला रहेको उनीहरुको भनाइ छ। यौ नकर्मी भन्ने बित्तिकै मनमा महिलाको तस्बिर आउछ।
सञ्चारमाध्यम लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि महिला यौ’नकर्मीकै चर्चा हुन्छ। प्रहरी एवं गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि महिला यौ नकर्मीलाई प’क्रने तथा उद्दार गर्ने गर्छन। यो अस्तव्यस्तमा पुरुष यौ’नकर्मी भने सहजै तवरले ध’न्दा सञ्चालन गरीरहेका छन्। उनिहरुलाई प्रहरीको ड’र पनि छैन अनि अन्य कसैको झन्झट पनि। पुरुष यौ नकर्मीको रेट (पारिश्रमिक) भने नभएको मनोजले बताए।
हाम्रो कुनै रेट छैन्’ उनले थपे। तर महिनामा ३०/४० हजार जति कमाइन्छ। उनीहरुलाई यौ’न सन्तुष्टि दिए बा’पत्त कसैले हप्तामा अनि कोहिले एक/दुई महिनामा पैसा र उपहार दिने गरेको उनको भनाई छ। एक विबाहित महिलालाई यौ’न सन्तुष्टि दिएपछि मैले एक कार समेत उपहार पाँए’ उनले भने। यसलाई अब के भन्ने ? यो रेट त होइन नि उपहार हो।
अर्का नविनले पनि थपे, मैले एक महिलाबाट एक लाखको मोवाइल पाएको छु’ उनले हातको मोवाइल देखाउदै भने, यो ६० हजारको मोवाईल पनि एक लाहुरेकी श्रीमतीले दिएकी हुन्। महिलामात्र बे’श्या हुदैनन्। यदि हुन्छन् भन्ने लाग्छ भने तपाई ग’लत हुनुहुन्छ। आजभोली समाजमा महिलामात्र नभएर पुरुष ‘बे’श्या’हरु ब’ग्रेल्ती भेटिन्छन्।
पुरुषहरु पनि वे’श्याको रुपमा व्यवसायमा हाम फालेका छन्। तर, उनीहरु खुल्ला रुपमा नभएर गो’प्य रुपमा व्यवसाय अघि बढाइरहेका छन्। पुरुष यौ’नकर्मीसंग महिलाहरु नै खोज्दै पुग्ने गरेका छन्। कुराकानिकै बिचमा आइपुगेका अर्का पुरुष यौ’नकर्मी विमल मगर (नाम परिवर्तन)ले आज भोली पोखरामा यो कुनै नया बिषय नै नभएको बताए।
यो कुनै नया कुरा नै होइन्’ उनले भने। हामीलाई खोज्दै आउनेलाई के छाड्ने तनि ? उनले उल्टै प्रश्न गरे। उनीहरुको सम्प’र्कमा आउनेहरु बढि बिदेशमा श्रीमान हुनेहरु रहेका छन्। कतिपय त यहि पोखरा श्रीमान भएका तर यौ’न सन्तुष्टि नपाएर उनीहरुलाई खोज्दै आउने गरेको विमलको भनाई छ।
संगै विभिन्न जागिर तथा पेशामा आवद्ध विबाहितसहित अविबाहित पनि रहेका छन्। २ बर्षमा हालसम्म दुई/तीन सय युवतीहरुहरुसंग यौ’न स’म्पर्क राखेको छु’ विमलले भने। खै कताबाट हो फोन गर्दै भेटौं भन्छन अनि कुराकानी भएपछि सबै कामकुरो हुन्छ।
कतिपयसंग त माया पनि बसेको मनोजले बताए। एउटी अर्काकि बुढिसंग त माया पनि बस्यो, छुट्नै गाह्रो भयो’ उनले थपे। मैले भन्दा नि उसले धेरै माया गरी, बल्ल बल्ल छुटियो त्यतिबेला धेरै नमज्जा लाग्यो। यस बिषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले केहि जानकारी नभएको बतायो। यस बिषयमा केहि कम्प्लेन पनि आएको छैन’ उनले थपेे। खासै ठुलो सम’स्या पनि भए जस्तो मलाई लाग्दैन।
यस्तो प्रतिक्रिया दिए पनि प्रहरी अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले भने यस्ता खालका घ’टनापछिका स’मस्याहरु आउने गरेको बतायो। श्रीमान अरु महिलासंग हिडेको थाहा पाएपछि श्रीमती पनि त्यस्तै खालका पुरुष खोज्दै हिड्ने गरेको पनि पछिल्लो समयमा पाइएको छ।
बिदेशमा श्रीमान भएका कतिपयले धन सम्पत्ति र छोराछोरीको बिच्चली पारी पर पुरुषसंग हिड्ने तथा धेरै महिला एक पुरुषसंग हिड्ने जस्ता सम’स्याहरु आउने गरेका छन्’ उनले भनेे। यस्ता प्रकृतिका ६ वटा केश हाम्रो केन्द्रमा आएका छन्। विभिन्न गैर सरकारी संघसंस्थाले ला’गु औ’षध, ए’च.आ’ई.’भी तथा ए’ड्स लगायतका क्षेत्रमा काम गरे पनि महिला तथा पुरुष यौ’नकर्मीको बिषयमा काम गर्ने संघसस्थाहरु भने रहेका छैनन्।
मोबाइल एप, जसले खोजिदिनेछ यौ’नकर्मी साथी
स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका लागि असंख्य एप्स उपलब्ध छन्। ती मध्ये कतिपय अत्यधिक कामलाग्ने तथा ज्ञानमूलक छन् भने कतिपय बेकम्मा र फन्टुस पनि। कतिपय गेमिङ एपले तपाइँलाई मू’र्ख पनि बनाउन सक्छन्। तर अब यस्तो एप आएको छ, जसले तपाइँका लागि यौ नसाथी खोज्न सहयोग गर्नेछ। मोबाइल फोनबाटै सहवासको आसनका बारेमा जानकारी दिने खालको एप पहिले नै उपलब्ध थियो।
तर यो पछिल्लो एप भने त्यसभन्दा पनि दुइ कदम अगाडि बढेर यौ’नकर्मीको खोजी गर्न सहयोग गर्नेछ। अस्टि्रयाका पिया पोपेनरिटरले यसको विकाश गरेका हुन्, जसको नाम पिपर राखिएको छ। यो एप जिपिएसको मद्दतले स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता रहेको ठाउँ वरपर रहेका यौ’नकर्मीहरु खोज्न सहयोग गर्नेछ।
यो एपको उद्देश्य सहवासका लागि यौ’नकर्मी महिलाहरु खोज्ने पुरुषलाई सजिलो बनाउने मात्र होइन यौ’नकर्मीलाई समेत ग्राहक खोज्दै सडकमा आउने बा’ध्यता हटाउनु हो । अहिले जर्मनीको बर्लिन सहरमा यो एपको प्रयोग सुरु भैसकेको छ । वे’श्यावृ त्तिले का’नूनी मान्यता पाएको जर्मनीका लागि लक्षित गरेर पियाले यो एप बनाएका रहेछन्।
यौ’न कर्मीहरु रातको ठण्डीमा सडकमा भौतारिएर ग्राहक खोजिरहेको देखेपछि दया लागेर उनले यो एपको विकाश गरेको दाबी गरेका छन्। यो एपको गलत प्रयोग नहोस् र यौ नकर्मीहरु मानव त स्करको जालोमा नपरुन् भन्ने कुरामा उनी सचेत छन् । उनका अनुसार यो एप कुनै वे’श्या लयको लागि होइन, व्यक्तिगत यौ नकर्मी तथा एजेन्सीहरुको लागि हो। यो एपको विशेषता के छ भने यसले केवल महिला यौ नकर्मीको लागि मात्र नभै पुरुष यौ नकर्मीको लागि समेत काम गर्छ।
महिला तथा पुरुष यौ’नकर्मी जसले यो एपको प्रयोग गर्छन् उनीहरुले आफ्नो प्रोफाइल यो एपमा निशुल्क रुपमा अपलोड गर्न सक्छन्। यो एप मार्फत यौ नकर्मी बुक गर्न चाहने ग्राहकले भने ५ देखि १० युरो सम्म शुल्क तिर्नुपर्नेछ। यो एपमार्फत आफ्नो रोजाइको यौ नकर्मी तथा स’म्भोगको आसन र तरिकाको बारेमा समेत माग गर्न सकिनेछ र सोही बमोजिमको सुविधा प्राप्त हुने दाबी एप कम्पनीको रहेको छ।